Concrete Vibrator, Concrete Trowel Machinery, Concrete Cutter - ACE MACHINERY
isu tiri kuvaka
Isu tanga tichichinja iwo mazano kuita mapurojekiti anokunda mibairo.
Ningbo ACE Machinery senzira yekugadzirisa michina yekuvaka michina ine ruzivo rwegore makumi maviri neshanu .Nechigadzirwa chikuru: Concrete vibrator, poker shaft, Plate compactor, Tamping rammer, Power trowel, Concrete chisanganiso, Concrete cutter, simbi bar bar cutter, simbi bar bender uye mini excavator . Tine 6 yakanakisa yekutengesa kwepasirese, mainjiniya maviri ane makore gumi nemashanu ezviitiko, 4 vagadziri, 3 QC uye 1 QA, kugadzira timu yakaratidza, mahunyanzvi ane ruzivo anonyatso kutonga zvinhu zvakakosha zvinobatanidzwa mukuita kwekutsvaga kwechigadzirwa uye kusimudzira. ona zvimwe
330kg ine 38.0kn Reversible ndiro compactor
270kg ine 36.0kn Reversible ndiro compactor
160kg ine 30.5kn Reversible ndiro compactor
125kg ine 25.0kn Reversible ndiro compactor
80kgs ine 15.0kn Plate Compactor ine tangi remvura
120kgs Kongiri Inotetemera Diesel Plate Compactor
90kgs ine 15.0kn Plate Compactor mutengo
77kgs ine 13.5kn Honda Plate Compactor
65kgs ine 10.5kn vibrating simba Plate Compactor
Chinyorwa Road Road yekumaka Machine
Yese- mune-imwe nzira yekumaka muchina
Kutonhora kupopera nzira yekumaka muchina
Mazuva ano mapurojekiti
ACE Mashini yanga ichitarisa mukuvandudzwa kwepamusoro-kumagumo zvizere emagetsi mahedhi. Mushure memakumi emakore ekubudirira, Iye zvino tine Imwe-dhiramu; Dhiramu-dhiramu uye Ride paVibration roller.
** Poclain kana American White Hydraulic system uye Hydraulic pombi
ACE Vibration roller yakagadzirirwa kushandiswa zvakanyanya mumhando dzese dzekuvaka kwezvivakwa uye kugadzirisa, chinhu chakakosha kuvaka michina yekugadzira pavement, kugadzirisa mashandiro, diki nzvimbo uye groove kuumbika.
ACE Mini Excavator yakagadzirirwa ine diki uye yakafara saizi uye kutendeuka radius .Mhando yepamusoro yekutengesa: 1.0T-1.2T-1.6T uye 2.0T. Inoshanda neakasiyana zvishongedzo, Senge: Bucket, Auger, Rake, Ripper, Wood Grab, Broken Hammer ... nezvimwewo. kunyanya inokodzera kumabasa madiki, mubindu, munda wemichero, munda wepurazi, greenhouse yemiriwo, kuiswa kwepipayipi, mabasa eguta nemaguta ekuvaka.
Inotyaira neYAMAR injini, iine ruzha rwakaderera uye kugona kwakanaka kwehupfumi, Japan Eton yekufamba mota uye yepakati kubatanidza, kuendesa hydraulic hose.
ACE Kuzvidzora Konkrete Chisanganiso imhando yemhando dzakasiyana-siyana michina iyo inosanganisa iyo yekufambisa chisanganiso, kongiri musanganisi uye vhiri rinotakura pamwechete.
Iyo yepamusoro yekutengesa modhi: 1.6m3-2.2m3-4.0m3 uye 4.2m3
Iyo inogona otomatiki kurongedza, kuyera, kusanganisa uye kuburitsa kongiri musanganiswa. Yakashongedzerwa ine simba YUNNEI 60kw ~ 92kw Diesel injini uye 4 vhiri dhiraivha, iyo yega kurodha kongiri musanganiswa yakangofanana netiraki uye muridzi anogona kuityaira kwainoda kuenda. Izvo zviri nyore kwazvo kurodha zvinhu, senge simende, uwandu hwezvibodzwa, dombo.
Hitachi ZX690LCR-7 & Yakanyanya Machine ...
30 Gumiguru, 20
Izvo nekukudziridzwa kwekuchera uye muchina wekuvaka, kune zvakawanda uye zvigadzirwa zvakawanda zvinoenderana nemamiriro akasiyana akagadzirwa, uye heino nhau dzichangoburwa nezve ma ...
R940 Crawler Excavator Kubva kuLibherr
21 Gumiguru, 20
France R&D uye nzvimbo yekugadzira ichangopedza muchina mutsva -R940 Crawler Excavator inova zvigadzirwa zvazvino zvechikamu cheR 944C Inobatsira kune vakapfuma ruzivo kubva kuLibherr, iyo ne ...
Nehunhu hwechigadzirwa seyedu yekutanga kukosha, isu tichagadzira iyo brand inotsanangudza iyo indasitiri.
ACE Mashini inonyatsobatanidza simba uye finesse kukuunzira yakanakisa mukongiri uye compaction michina.